Xog: Ugaaska Xawaadle oo diiday arrin uu Xasan usoo bandhigay - Caasimada Online
Home Warar Xog: Ugaaska Xawaadle oo diiday arrin uu Xasan usoo bandhigay
Xog: Ugaaska Xawaadle oo diiday arrin uu Xasan usoo bandhigay
Beledweyne (Caasimada Online) – Ugaaska Beesha Xawaadle Ugaas Xasan Ugaas khaliif, ayaa mar kale ka hor imaaday dalab uu ka helay Madaxweynaha uu wakhtigiisu dhammaaday Xassan Sheekh Maxamuud.
Ugaaska ayaa diiday dalab ku aadan in isaga iyo duubabka la safan ay ku biiraan shirka ka socda magaalada Jowhar kaasi oo maamul loogu yagleelaayo Gobolada Hiiraan iyo Sh/Dhexe, waxaana lasoo warinayaa in Ugaaska uu u deyriyay Xassan Sheekh.
Xassan Sheekh ayaa dalabkiisa la socday ballanqaadyo gaar ah oo uu usoo bandhigay Ugaaska, hayeeshee waxa uu Ugaaska laalay dalabka Madaxweynaha iyo Ballanqaadyada uu ka helay.
Ballanqaadyada Xassan ee ku aadan Ugaaska Xawaadle ayaa ku qeexnaa arrimo Siyaasadeed, waxa uuna Ugaaska Xassan u sheegay in Axdi uu ahaa kii hore, hayeeshee iminka uusan diyaar u aheyn wadahadal danbe oo ku saleysan Shirka Jowhar.
Ugaas Xassan ayaa Madaxweynaha u sheegay in arragtida duubabka diidan shirka Jowhar uu yahay mid aad u gaaban, taasi oo ku xiran fulinta qodobka ah in Gobolka Hiiraan labo Gobol loo kala qeybsho.
Ugaaska waxa uu sidoo kale, ku dooday in shaqsi ahaantiisa uusan gaari karin go’aan iyadoo aan la raali galin shacabka Hiiraan, waxa uuna meesha ka saaray in shirka ka socda Jowhar uu yahay mid looga tashanaayo danaha shacabka labada Gobol.
Madaxweyne Xassan dhowr jeer ku fashilmay in Ugaas Xassan uu ka dhaadhiciyo ka qeybgalka shirka Jowhar, kadib markii Ugaaska uu dhaliilay sida ay dowlada Somalia ugu kala eexaneyso labada Gobol.
Dhinaca kale, dalabka Xassan Sheekh ee ku aadan Ugaas Xassan ayaa imaanaya iyadoo magaalada Beledweyne ay saldhig u noqoneyso Axsaabta mucaaradka dalka.